Itoobiya xaggay u socotaa? War iyo faallo kooban – Xeernews24
Itoobiya xaggay u socotaa? War iyo faallo kooban
26. Oktober 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Xaaladda Itoobiya waa mid kasii daraysa oo waji cusub yeelanaysa maalinba maalinta ka danbaysa. Jawar iyo ra’iisalwasaare Abiy oo loo arkayay kuwo xulafo ah ayaa toddobaadkan madaxa isla galay taasoo sababtay in Jawar doorbido inuu muujiyo awooddiisa ku dhisan taageerada shacabka Oromada. Goob loogu magac-daray beerta midnimada oo dhawaan ra’iisalwasaaruhu furay ayay Oromadu aad uga cadhootay kadib markii goobta lagu xardhay sawirrada madaxdii hore ee Itoobiya ee kalitaliska ahaa. Dhinaca kale Abiy oo baarlamaanka la hadlayay ayaa digniin u diray dadka labada dhalasho haysta ee waddanka laaqaya, waa sida uu hadalka u dhigaye, taasoo loo macnaystay inuu Jawar ula jeeday. Waxa labadaas dhacdo xigay waraysi uu Jawar siiyay LTV oo uu ku dhaliilay qorshaha Abiy uu ku midaynayo xisbiyada EPRDF iyo kuwa bahwadaagta la ah. Jawaar ayaa ka digay in dib loogu noqdo nidaan kalitalis ah isagoo Abiy ku tilmaamay mid ficilladiisu u egyihiin kuwii Meles Zenawi. Isla habeenimadii u waraysigaasi baxay ayaa la sheegay inay dawladdu isku dayday inay Jawar ka wareejiso ilaaladiisa gaarka ah falkaas oo uu Jawar ku sheegay mid lagu doonayay in isaga lagu khaarijiyo waxana intaas xigay boqollaal ka tirsan taageerayaasha Jawar ee Qeerroo loo yaqaan oo isku gadamaay gurigiisa iyagoo sheegay inay amnigiisa sugayaan.
Wixii intaasi ka danbeeyay xaaladdu waxay isku beddeshay fawdo iyo qalalaase kadib markii ay taageerayaasha Jawar subaxnimadiiba iskugu soo baxeen waddooyinka iyagoo xidhay jidadka magaalooyin badan taasoo meelaha qaar isku beddeshay dagaal gacan-ka-hadal ah. Inta la ogyahay 67 qof ayaa ilaa iyo hadda ku naf waayay qulqulatooyinkan u danbeeyay. Dhacdadii ugu argagaxa badnayd ayaa ahayd muuqaal Facebook lasoo galiyay oo lagu sheegay wiil Oromo oo koox Axmaaro lagu sheegay ay dhagax qudha kaga jarayaan. Dhacdadan qariibka ah ayaa ka dhacday magaalada Adama (Nazreth) oo ah xarun Oromo balse Axmaaradu ku badantahay. Dhinaca kale waxa baraha bulshada lasoo galiyay hub la sheegay in lagu qabtay kaniisad ku taalla gudaha Oromia kaasoo lagu eedeeyay dad Axmaaro ah oo kaniisadda joogay. Ilaa iyo hadda lama sheegin cid loo qabtay rabshadahan u danbeeyay.
Ra’iisalwasaare Abiy oo markii ay rabshuhu dhacayeen dalka dibaddiisa ku maqnaa ayaan wali wax hadal ah laga haynin wuxuuna u muuqdaa nin ay talo ku ciirtay oon xitaa Oromadiisii gacan ugu jirin. Waxa culayska kusii badiyay Jawar oo mar uu warbaahinta caalamka la hadlayay sheegay inuu aad uga fiirsanayo inuu tartamo doorashooyinka la filayo taasi oo hadday dhacdaba Abiy ku noqoni doobta dhabar-jab wayn oo aanu kasoo kabsani karin.
Si kastaba, Itoobiya waa dal u muuqda inuu qaaday dhabbadii burburka iyo kala-tegga walow ay wali ciidammadu u egyihiin kuwo midaysan. Maalinta uu ciidanka militarigu kala safto ayaa noqoni doonta maalinta ugu danbaysa ee ay Itoobiya si dhab ah u kala yaaci doonto. Innaga maxaa inoo dan ah? Maxaa innala gudboon inaan samayno xilligan adag?
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/faalo-gaaban-230x130.jpg 130 230 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-26 13:46:192019-10-26 13:46:19Itoobiya xaggay u socotaa? War iyo faallo kooban
Mudane,Jawar Mohammed oo ku eedeeyay Dr.Abiy Ahmed Kaligii Talisnimo. Xogta Dahsoon xidhiidhka Ruushka iyo Afrika iyo Sacuudiga iyo Xuutiyiinta